အစိမ်းရောင်အစာကိုအဓိကအားဖြင့်ဗီတာမင်ချို့တဲ့ဖြည့်စွက်ရန်အသုံးပြုသည်, ယေဘုယျအားဖြင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး 30% လတ်ဆတ်သောအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကဲ့သို့အရောအနှောအကြောင်းအရာထဲမှာ,alfalfa အကောင့်များ 20% ရန် 30% အရောအနှော၏, ပြောင်းဖူးအရွက်များကဲ့သို့သောသစ်ရွက်များစိမ်းလန်းသောအစာများကိုအသုံးပြုကြသည်, ခရမ်းရောင်ကျိုင်းကောင်အရွက်,အကောင့်တစ်ခု 5% ရန် 10% အရောအနှော၌တည်၏.
ပရိုတိန်းအစာသည် ၃၀% မှ ၆၅% တွင်ပါဝင်သောပရိုတိန်းပါဝင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည် 5%-30% အရောအနှော၏. များသောအားဖြင့်ပရိုတင်းအစာအမျိုးမျိုးရှိသည်, ထိုကဲ့သို့သောပဲကိတ်မုန့်နှင့်မြေပဲကိတ်မုန့်အဖြစ်,ပဲပုပ်ကိတ်နှင့်မြေပဲ cake 10% ~ 20% အရောအနှော၌တည်၏. ငါးမုန့်ညက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်, အရာအရည်အသွေးမြင့်မားတိရိစ္ဆာန်ပရိုတိန်းအစာကျွေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်, ငါတို့ပေါင်းနိုင်သည် 5% ~ 15% အရောအနှော၌တည်၏. Cottonseed cake သည်များသောအားဖြင့်ထက်နည်းသည် 7% ရောနှောအစာကျွေးခြင်းကအဆိပ်ပါရှိသောကြောင့်.
ပြောင်းဖူးလိုစွမ်းအင်ဖြည့်တင်းမှု, bran, မုယောနှင့် sorgum ဖြစ်ကြသည် 45%-70%, 5%-30%, 15%-20% နှင့် 10% အသီးသီး. ဆန်ဖွဲနုအတွက်, အရာမကြာခဏတစ်ခုတွဲဖက်အဖြစ်အသုံးပြုသည်, ထို့အပြင်ယေဘုယျအားဖြင့်ထက်ပိုသည်မဟုတ် 8% အရောအနှော၌တည်၏.
အထက်ပါကြက်ဘဲအစာတောင့်အတွက်ကုန်ကြမ်းများကို ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူပြီးစျေးလည်းသက်သာသည်။ စျေးကွက်မှအစာလုံးလေးများ ၀ ယ်ပါကစျေးနှုန်းပိုမိုမြင့်မားလိမ့်မည်။. မတူတာကတော့, ကစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်တစ် ဦး ကိုဝယ်ခြင်းငှါပိုမိုအဆင်ပြေသည် သေးငယ်တဲ့အစာကျွေးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ကြက်ဘဲအစာကျွေးရန်.
အသေးစားအစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းကိုအသုံးပြုသောအိမ်သည်များသောအားဖြင့်အကြောင်းအရာ3တကယ,တ ဦး တည်း crusher နှင့်ရောနှောပေါင်းစပ်စက်, တ ဦး တည်းဝက်အူပေါ်ကိုနှင့်တလုံးလုံးတောင့်စက်. ဒါဟာကြိတ်ပြီးအောင်နိုင်ပါတယ်, ရောစပ်ခြင်း, အတောင့်ထုတ်လုပ်ခြင်း. အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြင့်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြုလုပ်သောတောင့်သည်, အလယ်အလတ်မာကျောမှု, နက်ရှိုင်းသောပြည်တွင်းရေးရင့်ကျက်, ဒါ့အပြင်သူကရောဂါဖြစ်ပွားစေသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများနှင့်ကပ်ပါးကောင်များကိုသတ်နိုင်သည်. အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာအစာကျွေးခြင်းအရည်အသွေးသည်သန့်ရှင်းပြီးတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုဖြစ်သည်. ဒါဟာကြက်၏အာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းထိရောက်စွာအစာကျွေး၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်.